Ukuba kunokwenzeka, iGoogle AMP Cache yenza isizinda kuwo onke amaphepha e-AMP akwisizinda esinye.
Okokuqala, i-domain yewebhusayithi iguqulwe ukusuka kwi- IDN (ikhowudi ye-pony) ukuya kwi- UTF-8 . Iseva efihlakeleyo ifaka endaweni yayo:
Oku kuthetha ukuba isalathiso sikaGoogle kunye nokugcina inguqulelo yephepha le-AMP kwiserver yalo, phantsi kwe-URL ye-AMP efihlakeleyo yeserver eyenziweyo ngokwendlela ethile. Ngale URL, kwifomathi ye-cache ye-AMP , ungatsalela umnxeba kwaye ujonge uhlobo lwangoku lwe-AMPHTML ngoku egcinwe kwindawo yokugcina i-AMP ye-injini yokukhangela kuGoogle. -Iinkcukacha ezithe kratya malunga ne-Google AMP cache .